यसरी बनाउन सकिन्छ कम लागतमा उत्कृष्ट डिजाइनको घर — Chetana Online
यसरी बनाउन सकिन्छ कम लागतमा उत्कृष्ट डिजाइनको घर
केहि वर्षअघिको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भएपछि अहिले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण कार्य बढिरहेको छ । नेपालजस्तो पहाडी मुलुकमा भूकम्पको जोखीम सधैं हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सोही कारण अहिले बलिया र भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन धेरैको चासो बढेको छ । अहिले कम खर्चमै आकर्षक र बलियो घर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर खोजी हुन थालेको छ । कसरी बनाउन सकिन्छ त थोरै लागतमै उपयुक्त घर ? यहाँ केही उपाय दिइएको छ :
घर बनाउँदा सबैभन्दा पहिला नक्सा (डिजाइन)मा ध्यान दिनुपर्छ । कत्रो, कस्तो र कुन किसिमको घर बनाउने र कति लागत लाग्ने भन्ने नक्सा बनाउँदा नै तय गर्नुपर्दछ । आफ्नो जग्गाको साइजअनुसार उपयुक्त र सबै ठाउँको सदुपयोग हुने किसिमले घरको नक्सा इञ्जिनीयरलाई बनाउन लगाउनुपर्छ । यसले घरको लागत पहिले नै थाहा पाउन सकिन्छ ।
पछि डिजाइन परिवर्तन नगर्नुहोस्
कतिपय मानिस घर बनाइसकेपछि त्यसको भित्र निर्माण गर्ने भान्साकोठा, सुत्नेकोठा, बाथरूम आदिको डिजाइन परिवर्तन गर्दछन् । यसले गर्दा डिजाइन खर्च बढ्ने, कामदार खर्च बढी हुने, घरको क्षमता फरक हुने र त्यसको निर्माण महँगो पर्छ । त्यसैले, पहिले नै सही डिजाइन छनोट गरी सोहीबमोजिम निर्माण गर्नुपर्छ ।
वर्गाकार आकारमा बनाउनुहोस्
घर निर्माण विशेषज्ञहरूका अनुसार अन्य घरभन्दा वर्गाकार घर बनाउँदा धेरै सस्तो पर्छ । आयताकार घरको भन्दा वर्गाकार घरको निर्माण लागत १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कम पर्ने इञ्जिनीयरहरू बताउँछन् । साथै, एक तलाको ठूलो घर र त्यसमा कोठाहरू बनाउनुको सट्टा दुई तलाको सानो घर निर्माण गर्दा २५ प्रतिशत लागत खर्च कम लाग्ने बताइन्छ ।
वालहरू कम बनाउनुहोस्
घर निर्माण गर्दा भित्रपट्टि कम सङ्ख्यामा वाल राख्दा फाइदा हुन्छ । बाहिरी वालको दाँजोमा भित्री वालको मोटाइ पनि पातलो बनाउनु राम्रो हुन्छ । यसले घरमा ठाउँ बढी उपलब्ध हुन्छ भने खर्च पनि कम लाग्छ । साथै, घरमा भ¥याङका खुट्किला ज्यादा घुमाउरा तथा धेरैको सट्टा चुस्त र कम बनाउनुपर्छ । यसले लागत र ठाउँ दुवै बचत गर्न सकिन्छ भने घरलाई भद्दा देखिनबाट पनि जोगाउँछ ।
घर बनाउने सामानको छनोट
घरको सम्पूर्ण खर्चको ६५ प्रतिशत खर्च घर बनाउने सामानमा लाग्छ । यसैले, भान्सा कोठाका सामान, बिजुलीका सामान, पाइप, काठ, सिलिङमा प्रयोग गरिने सामान, सजावटका सामान र अन्य सामान सस्तोमै गुणस्तरीय पाइने ठाउँमा खरीद गर्नुपर्छ ।
एकै गुणस्तरका सामान पनि ठाउँअनुसार महँगो पर्ने भएकाले बजारभाउ बुझेर मात्र खरीद गर्नु राम्रो हुन्छ । देखिने र आवश्यक ठाउँमा महँगो सामान प्रयोग गरे पनि नदेखिने र अनावश्यक स्थानमा कम मूल्यका बलिया सामान प्रयोग गरेर खर्च घटाउन सकिन्छ ।
सरकारले गर्ने काम मात्र होइन, निजी घरहरू निर्माण गर्दा पनि नाफाखोर ठेकेदारका कारण लागत बढ्न सक्छ । त्यसैले, घरको लागतअनुसारको काम गर्न सही ठेकेदारको चयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ठेकेदार इमानदार र अनुभवी भएमा निर्माण सामग्रीको सदुपयोग हुनुका साथै व्यवस्थापन पनि राम्रो हुन्छ । यसबाट कम खर्चमै पनि गुणस्तरीय काम गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: October 24, 2017
सौरभ ज्योति बने नेपाली इन्जिनियरले बनाएको इलेक्ट्रिक बाइक ‘यात्री’ को पहिलो ग्राहक
दोलखामा उत्पादन भएको अकबरे खुर्सानी कतार निर्यात
मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतले बढ्यो- राष्ट्र बैंक
नेपालमा केही गर्न सकिँदैन,लगानी गर्ने ठाउँ छैन भन्नेहरुले पिताम्बरबाट सिक्ने कि ?
अदुवा निकासीमा भारतको फेरि अवरोध- बारी र गोदामै कुहिँदै, करोडौंको क्षति
यस कारण कतारमै अड्कियो रेमिट्यान्स, डलर अभावले निम्तियो समस्या
राप्तीमा आयो नेपालकै महंगो भेस्पाको स्कूटर